Gerrard Oo Shaaca Ka Qaaday Kooxda Uu Doonayo In Liverpool Ay Isku Arkaan Finalka Champions League – Gool FM
(Champions League) 26 Abriil 2018 Steven Gerrard Gerrard ayaa daaha ka rogay kooxda uu doonayo Real Madrid Bayern Munich, si ay ugu kulmaan kulanka finalka Champions League ee xili ciyaareedkan ka dhici doono magaalada Kyiv ee dalka Ukraine.
Liverpool ayaa hal lug lasii gashay inay iska xaadiriso kulanka finalka ee tartanka Champions League xili ciyaareedkan, kadib markii ay 5-2 ku garaacday kooxda reer talyaani ee AS Roma, kulankii lugta hore wareega afar dhamaad.
Dhanka kale, Real Madrid ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Bayern Munich garoonkeeda Allianz Arena, isla kulanka lugta hore afar dhamaadka Champions League ee xilli ciyaareedka 2017/2018.
Hadaba Steven Gerrard oo kulankan kala hadlayay saxaafada ayaa wuxuu u sheegay: “Waa hubaal waxaan rajeynayaa in Liverpool ay kulanka finalka isku arkaan Bayern Munich, sababtoo ah fursadaha waxay ka fiicnaan kulanka Real Madrid”.
“Waxaan qabaa inay sahlan tahay inaan kahor imaano Bayern Munich kulanka finalka, sababtoo ah Real Madrid waxay laheyd khibrado xoogan eek u aadan sanadihii lasoo dhaafay”.
Kooxda Hannover oo ku camiratay Bayern Munich kadib guul daradii xalay